အဘယ်အရာကို '' BRO TASE ငါ့ကို BRO 'ကောင်လေးမှဖြစ်ပျက်? - သတင်း
အဘယ်အရာကို '' Bro Tase ငါ့ကို Bro 'ကောင်လေးမှဖြစ်ပျက်?
သူအရိုက်ခံရသည့်နေ့၌ Andrew Meyer သည်ဗိုင်းရပ်စ်အာရုံခံစားမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုဘယ်သောအခါမျှခန့်မှန်း။ မရနိုင်သော်လည်း၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းကြားသိသောငိုကြွေးသံဖြစ်လာခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကယခုအပတ်တွင်ဖလော်ရီဒါရှိရဲအရာရှိတစ် ဦး ၏လက်နက်မှဗို့အား ၅၀၀၀၀ ဖြင့်သယ်ဆောင်လာသည့်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်လာသည်။ Don't Tase Me Bro သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်အွန်လိုင်းစွဲစွဲလန်းလန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး FarmVille၊ Soulja Boy၊ roflcopter၊ Leave Britney Alone၊ ချောကလက်မိုး၊ Cinnamon Challenge၊ Keyboard ကြောင်၊ Miss Teen တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား၊ , rickrolling, lmao rawr XD နှင့် emos ။
အင်တာနက်နှစ်များတွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုသည်ဘဝများစွာသို့ရောက်ရှိခဲ့သည် - မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလှသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအောင်မြင်မှုရှိသည့်ကလေးငယ်များသည်ကောလိပ်ကောလိပ်ကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ်လာပြီးကြီးပြင်းလာပြီးနောက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းကျိုးများအဖြစ်အသက်ကြီးလာသည်။ ဒီတော့ ၁၀ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် Andrew Meyer ဘာဖြစ်လာခဲ့သလဲ။
သူအခုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ ၂၀၀၇ ကိုပြန်ပြောင်းရမယ်။
အပေါ်ကအင်ဒရူးကငါ့ကိုမပို့ပေးတဲ့ 'Tase Tase Me Bro' ရဲ့မူရင်းကိုကြည့်ပါ၊ အဲဒါကဘယ်လောက်အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာသင်စိတ်ပျက်သွားမှာပါ။ ဗီဒီယိုသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ ၎င်းနှင့်မကိုက်ညီပါ သီချင်းစာသားများ၊ ကာတွန်းကိုးကားချက်များနှင့်ကာတွန်းစာအုပ်များ ဒါကမှုတ်သွင်းခံ
UF မှကျောင်းသားအင်ဒရူးအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်ကယ်ရီ၏ဆွေးနွေးမှုတွင်တက်ရောက်သူမိုက်ကယ်တက်သည် ထိုအချိန်ကသတင်းထောက်တစ် ဦး သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သောကယ်ရီနှင့်အီရန်နှင့်ယေးလ်၏ ဦး ခေါင်းခွံနှင့်အရိုးများဆိုင်ရာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏မေးခွန်းများကိုပယ်ချခဲ့သည်။ တစ်ခုပို။ ပို။ တုန်သုံး Parter '' အဘယ်သူမျှမသဘောမျိုးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ Pizzagate၊ Zodiac လူသတ်သမား၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသမိုင်းကြောင်းနှင့်မြေကြီးပြန့်ကျဲတည်ငြိမ်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၎င်းသည်ယဉ်ကျေးသောအရာများဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျောင်းဝင်းရဲများအားသူ၏မိုက်ခရိုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်မိန့်ခွန်းအားကြားပြောခြင်းကိုမရပ်တန့်စေနိုင်ပါ။ 'ငါ့ကိုယူပါ' Andrew ကြွေးကြော်သည်။ 'မင်းဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ကူညီကြပါ! ကူညီကြပါ! ကူညီကြပါ!' ရိုင်းရိုင်းရိုင်းစိုင်းတဲ့ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာပဲအရာရှိငါးယောက်ကိုသူ့ကိုမြေပြင်ပေါ်မှာလက်ထိပ်ခတ်ထားသည်။
သင်၏လက်ကိုသင်၏ကျောနောက်သို့ရွှေ့လော့။ ဂျွန်ကယ်ရီ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမကြိုးစားဘဲကင်မရာအပြင်ဘက်နှင့်စင်မြင့်ပေါ်မှလည်းကြားနိုင်သကဲ့သို့အရာရှိများကအော်ဟစ်နေကြသည်။ အင်ဒရူးက 'အချင်းလူ၊ ငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး ငါ့ကို Bro tase မနေပါနဲ့! ငါ့ကိုမမြည်ပါနဲ့! '
ရဲကသူ့ကိုလျစ်လျူရှုပြီးတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ Taser ကိုသုံးတယ်။ သင်လုပ်သည့်လက်နက်၏ tick tick ၏အသံကိုကြားနိုင်ပြီးအင်ဒရူးသည်စတင်အော်ဟစ်လေသည်။ ကြည့်ရတာခက်တယ်
အင်ဒရူး: 'ငါကြည့်ဖို့ငါ့လမ်းထဲကမသွားဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပေါ်လာသည် ပြောတယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသတင်းထောက်များ။ '' ငါမြင်တိုင်းသူနာကျင်နေဆဲဖြစ်သည်။ လူတွေက Taser အကြောင်းဘာမှမလုပ်သလိုပြောကြတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းတချို့လူတွေကအရသာခံပြီးသူတို့မခံစားမိကြဘူး။ ငါခံစားမိတဲ့အခါအဲဒါဟာစိတ်ပျက်စရာပဲ။ '
'me tase me bro' ဆိုတဲ့စကားစုကိုထပ်ထည့်ပြီး ၄ င်း၏အခြေအနေကိုလျစ်လျူရှုခြင်းအားဖြင့် memes သည်အဖြစ်အပျက်ကိုကျန်းမာစေပြီးရယ်စရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်မှုကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာအွန်လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Saccharine လွင်ပြင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ယခုအချိန်တွင်ခေတ္တရပ်တန့်ရန်လိုသည်။ ရယ်စရာအတွက်အတားအဆီးသည်ယခု ပို၍ မြင့်မားပုံရသည်။
tiktok ပေါ်မှာ disney filter လုပ်နည်း
အင်ဒရူးအားအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားစေရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အရာရှိတစ် ဦး အားခုခံခြင်းတို့ဖြင့်စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။ သူသည်တစ်ညလုံးထောင်ကျခဲ့ပြီးစွဲချက်များကိုပယ်ဖျက်ခြင်းအားလဲလှယ်ရန်အစမ်းကာလကိုသဘောတူခဲ့သည် ပါဝင်သည့်အရာရှိနှစ် ဦး ကိုလစာဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ကယ်ရီနောက်ပိုင်းတွင် Charlottesville မှ Trump ရဲ့ 'All- နှစ်ဖက်' 'တုံ့ပြန်မှုကိုကြိုတင်ရှင်းလင်း, နှင့်အင်ဒရူး' 'ငါ့အား bro tases ငါ့ကိုမပြုကြ' 'ဟုအော်ဟစ်, အရသာခံရခြင်းကိုရည်ညွှန်းကြောင်းမသိရဟု cack- လက်ကြေညာချက်စေလိမ့်မယ်
ငါအဆောက်အ ဦး ကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်အထိ Taser ကိုသုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ကျောင်းသားရောရဲတစ်ယောက်မှဒဏ်ရာမရဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျန်းကျန်းမာမာဆွေးနွေးမှုရပ်တန့်သွားတာကိုကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။
UF တွင်အချိန်ပြီးဆုံးပြီးနောက်အင်ဒရူးသည်ဥပဒေကျောင်းသို့တက်ခဲ့ပြီးနောက်စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင်ဓါတ်ပုံများသည်မီဒီယာဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သော“ ဓာတ်ပုံမရာဇ ၀ တ်မှု” နှင့် သူ့ကိုယ်ပိုင် site ကို ။
Andrew Meyer သည်ဖလော်ရီဒါတွင်နေထိုင်ပြီးညာတောင်ပံမှ Mike Cernovich အတွက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
အင်ဒရူးနှင့်သူ Mike Cernovich
အကယ်၍ သင်သည် Cernovich ၏ကျွမ်းကျင်သော livestreamer အကြောင်းကြားဖူးပါက၎င်းသည်သူ့ထံမှလာနိုင်သည် ပီဇာ ပေါ်ပေါ်ထွန်းထံမှ Infowars သို့မဟုတ်သူ၏ဝေဖန်ပြစ်တင်ခေါ်ဆိုခြင်းမှ မင်္ဂလာပါ အွန်လိုင်း။ သူသည်ဘန်ဂါဇီ၊ ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်နှင့်ဓာတုဗေဒလမ်းကြောင်းများကြောင့်ကမ္ဘာ့ပြproblemsနာများ၏အကြောင်းရင်းများဟုထင်မြင်ကြသော MAGA ultras မျိုးစုံ၏နောက်လိုက်များကြောင့်လည်းလူသိများသည်။
The Tab နှင့်အင်တာဗျူးတွင် Meyer က“ ကျနော့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကကျွန်တော့်အမြင်နဲ့ဆင်တူတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုရှိစေချင်တယ်၊ Wall Street နဲ့စစ်တပ်စက်မှုဇုန်မှာရှိတဲ့ရာဇ ၀ တ်သားတွေကိုတရားစွဲဆိုချင်တယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုသူအဘို့အရေးသားခဲ့သည် cernovich.com အသက်ရှူမ ၀ င်သောခေါင်းစီးများနှင့်အတူပုံပြင်များအကြောင်း -
ကလင်တန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Pedophile အမှု၌ပါ ၀ င်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက် Cernovich's Legal Quest မဟာမိတ်ရရှိသည်
Colin Kaepernick အတွက်ဂျီဟတ် Supporter Protest NFL အပါအဝင် Seth Rich Alt-Left အစွန်းရောက်များ
'မင်းရဲ့ Goldman Sachs ကိုမင်းရဲ့နံနက်သတင်းတွေကိုဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲပြောပြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါသလား' သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်။ Wall Street Consortiums မှပိုင်ဆိုင်သော New York Times ကဲ့သို့သတင်းများကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်သန်းနှင့်ချီသောအမေရိကန်လူမျိုးများသည်ထိုအရာကိုအတိအကျလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ၂၀၀၈ မှာဘဏ္collာရေးပြိုကျမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့လူတွေဟာဒီသတင်းကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာကိုလူတွေကိုပြောနေကြတာပါ၊ နှစ်ဖက်စလုံးကနိုင်ငံရေးသမားတွေကဒီစနစ်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးအမေရိကန်တွေကိုကျဆုံးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကူညီပေးတယ်။
Meyer ကအရသာခံအဖြစ်အပျက်ကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေခဲ့သလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်သူမ Tase Me Troy ကောင်လေးလို့လူသိများကျော်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။
John Kerry ကိုကိုင်ဆောင်နေသောကျောင်းသားတစ် ဦး မှ DNC လူသတ်မှုပူးပေါင်းကြံစည်မှုများနှင့်ဘီလျံနာသူဌေးကြီးများနှင့်ပတ်သက်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုရေးချရန်အခိုက်အတန့်ရှိခဲ့လျှင်၎င်းကိုသင်၏ရှေ့မှောက်ရှိအရာရှိများက ဖမ်းဆီး၍ အရက်သောက်လိမ့်မည်။ ရွယ်တူချင်းများ
သို့တိုင်သူက 'ငါယူအက်စ်မှာအရာတစ်ခုခုပြောင်းနိုင်ရင်ငါတို့အချင်းချင်းစကားပြောကြမယ်။ လူတို့သည်လူတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားစွာဆက်ဆံသင့်ပြီးအမှန်တရားကိုစိတ်အားထက်သန်စွာရှာဖွေသင့်သည်။ သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုသူတို့၏အိမ်ဘောလုံးအသင်းကဲ့သို့ခုခံကာကွယ်ခြင်းထက်သူတို့ဘယ်တော့မှမှားယွင်းမှားယွင်းမရနိုင်ပါ။
Twitter မှာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့လူတွေကိုအားပေးတယ် @TheAndrewMeyer ။ မင်းလက်လွတ်မခံချင်တဲ့ပရောဂျက်တခုကိုနာမည်ကြီးဂျာနယ်လစ်တချို့နဲ့အတူငါနောက်ကွယ်မှာလုပ်နေတယ်။ '
အခုသူတို့ရှိရာ Gilmore မိန်းကလေးများသွန်း
'' မဲချသူတွေကဘာမှမဆုံးဖြတ်ဘူး။ မဲရေတွက်တဲ့သူကဆုံးဖြတ်ရမယ်။